120Hz AMOLED Display နဲ့ ထပ် Kill ဦးမှာလား K30 Ultra ရေ?? — Anycall Mobile
By liam August 10, 2020 1 Min Read
လက်ရှိ K30 Series ထဲမှာဆို K30 ၊ K30 5G ၊ K30i 5G ၊ K30 Racing ၊ K30 Pro နဲ့ K30 Pro Zoom ဆိုပြီးဖုန်း ၆ မျိုးအထိထွက်ထားတာကိုအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ မကြာခင်မှာ ဒီ ၆ မျိုးထဲကို နောက်ထပ် ၇ လုံးမြောက်ဖုန်းတစ်လုံး ဝင်လာဖို့ရှိနေပြန်ပါပြီ။ ဒီဖုန်းအသစ်ဟာ K30 Ultra ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
အရင် ဖုန်း ၆ မျိုးထဲမှာ K30 Pro နဲ့ Redmi K30 Pro Zoom တို့မှာပဲ AMOLED Display ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ AMOLED Display ဆိုပေမယ့်လည်း ဒီ Models တွေမှာ 60Hz Refresh ကိုပဲထောက်ပံ့ပေးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခု K30 Ultra မှာတော့120Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ AMOLED display ပါလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်လာပါပြီ။
ဒီသတင်းဟာဆိုရင် ITHome Website ထဲမှာထွက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပြီး သတင်းထဲမှာ K30 Ultra ဟာ Redmi K30 Pro ထဲမှာမပါခဲ့တဲ့ High-refresh Rate ပါလာတော့မယ့်အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
Redmi K30 Ultra မှာ K30 Pro နဲ့ Zoom Models တွေလို Camera Design ရှိပြီး Pop-up Selfie Camera ကိုဆက်သုံးပေးလာနိုင်ပါတယ်။ Pop-up Selfie Camera ကြောင့် Notch တွေ ၊ Punch-hole တွေ ပါလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
K30 Ultra မှာ MediaTek ရဲ့ Dimensity 1000+ Chipset နဲ့အားဖြည့်ပေးလာဖို့ရှိနေပြီး 8GB RAM နဲ့ တွဲပေးလာမှာပါ။ Dimensity 1000+ Chipset ဟာဆိုရင် AnTuTu ကနေသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်း Chipset စာရင်းထဲမှာ နံပါတ် ၂ နေရာမှာရှိနေတာမလို့ သူ့ရဲ့ Performance ဟာ Snapdragon 865 နီးပါးစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဖုန်းရဲ့ ကျောဘက်မှာတော့ 64MP Quad-Camera Setup နဲ့ Selfie အတွက် 20MP selfie camera ပါလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ Battery အတွက် 33W Fast Charging ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ 4500mAh battery ကိုသုံးပေးလာနိုင်ပါတယ်။
Redmi K30 Ultra ဟာဆိုရင် လာမယ့် August 11 နေ့မှာ Mi 10 Ultra နဲ့အတူ တရားဝင်မိတ်ဆက်လာတော့မှာပါ။
ဒီလို Specs တွေသာမှန်လာခဲ့ရင်တော့ K30 Ultra ကိုဘယ်ဖုန်းကများယှဉ်လာနိုင်မလဲ?? စိတ်ဝင်စရားတော့ကောင်းနေပါပြီ…